Iingcebiso zokuphumla | Amadoda aQinisekileyo
Kukulungele ukusebenzisa ubuchule obuqinisekisiweyo bokuphumla, i-yoga, ukucamngca, ukuziqonda ngokwakho, zezinye zeendlela ezinokukunceda uzive ungcono kwaye ukhulule umoya wakho kumaxhala emihla ngemihla. Ukujonga into emnandi kunceda ukunciphisa amanqanaba oxinzelelo kwangoko.
2 Hamba okanye uhambe
Umzuzu onikelwe ekufundeni unokuba luyolo. Kukulungele ukwenza lo mzuzu wokufunda ube lixesha elonwabisayo. Indawo efanelekileyo kukulala esofeni, ebhedini okanye kwindawo oyithandayo, njengepaki okanye elunxwemeni. Kufuneka ufunde ukuba uziva njani. Umzekelo inoveli, imagazini, njalo njalo. Ibalulekile kancinci, eyona nto ibalulekileyo kukusebenzisa ithuba lokuphumla ngokufunda into oyifunayo.
Hamba okanye uhambe
Yedwa okanye uhamba kunye, eyona nto ifanelekileyo kukuhamba kangangexesha yonke imihla. Ukuhamba kunceda ukukhulula umoya, ukonwabela imbonakalo yomhlaba, umoya ophefumlayo, abantu obadlulisayo. Ukuba awunalo ixesha, ungaphuma kuphela imizuzwana embalwa. Lo mzuzu unceda ukucinga ngenye into kwaye ukhuphe umoya. Kwaye ukuba emva kokuhamba, unalo ixesha lokuhlala phantsi, unokufumana ibhentshi elangeni. UMoya uya kukubulela.
Uxinzelelo lwemihla ngemihla, amaxhala okanye into ebangela ukungazinzi yenza ukuba amehlo ahlale evulekile ngaphandle kokubona okukujikelezileyo. Ngamanye amaxesha kwanele ukujonga ngaphandle ngefestile okwemizuzu embalwa, okanye ukubukela abantu abadlulayo. Ukujonga ngeenxa zonke kuwe, ukuphumla kunokwenzeka. Isizathu kukuba okwexeshana, umoya uyazilibala iinkxalabo zobomi bemihla ngemihla kwaye uyazixabisa izinto ezikungqongileyo.
Unokutshintsha amaxesha okuzola kunye nomsebenzi. Ngamaxesha oxinzelelo kunye nomsebenzi onzima, kubalulekile ukuba ube namaxesha okuphumla kunye nokuzola ukuze uphumle kwaye unxibelelane kwakhona nesiqu sakho. Ukuba awuyeki, ugqibela ngokubandezeleka kwaye ugule.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Amadoda aQinisekileyo » Kufanelekile » ZeMpilo » Iingcebiso zokuphumla
Athini amanqaku abuthathaka omfazi?